युवाले ‘वैकल्पिक शक्ति’को साटो किन रोजे राजतन्त्र ? « Bagmati Page
काठमाडौं । राजावादीहरुको देशव्यापी प्रदर्शनले वर्तमान व्यवस्था, नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिमाथिको बहसलाई निम्तो दिएको छ । साथै प्रदर्शनमा देखिएको उल्लेख्य युवा सहभागिता पनि सोचनीय पक्ष बनेको छ, जसले दुईवटा प्रश्न जन्माएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग रुष्ट युवाहरुले विकल्पका रुपमा ‘वैकल्पिक शक्ति’ को साटो किन राजतन्त्र रोजे ? के यो वैकल्पिक शक्तिको असफलता हो ?
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्ने विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सिलवालले वैकल्पिक राजनीति रक्षात्मक अवस्थामा रहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘वैकल्पिक राजनीतिक दलले आफूलाई बलियो गरि स्थापित गर्न नसकेकै कुरा सत्य हो । अहिले वैकल्पिक राजनीतिक दल आफ्नो आन्तरिक कुराले गर्दा रक्षात्मक अवस्थामा छन् । वैकल्पिक राजनीतिक दल भनिरहेकाहरुले आफ्नो प्रस्ट एजेण्डा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि धेरै वैकल्पिक राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डा वा सिद्धान्त स्पष्टता ल्याउन नसक्दा समस्या आएको छ ।’
नेकपा, नेपाली काँग्रेस र सरकारबाट डेलिभरी गर्न नसक्दा असन्तुष्ट जमात राजावादी आन्दोलनमा सामेल हुनुमा उनले आफूहरुको पनि कमजोरी भएको सुनाए ।
‘अबको केही समयमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति सफल भए भने यो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छ । यदि वैकल्पिक राजनीतिक दलहरुले दिशा लिन सकेनन् भने यो आन्दोलन झन् झन् बढ्दै जान्छ । वैकल्पिक पार्टीहरुले सांगठनिक रुपमा बलियो भएर वैचारिक स्पष्टताका साथ यो आन्दोलन भड्किन दिनु हुँदैन,’ सिलवालले भने ।